Guddida Qaban-qaabada Munaasibadda 18-ka May Oo Kulankoodii U Horreeyey Yeeshay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Guddida Qaban-qaabada Munaasibadda 18-ka May Oo Kulankoodii U Horreeyey Yeeshay
Published on April 11, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Guddida qaban-qaabada xuska munaasibadda qaran ee 18-ka May, ayaa maanta gelinkii danbe ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey ee la xidhiidha dardargelinta hawlaha hor yaalla.
Guddidan oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa kulankoodii ugu horreeyey ku yeeshay xarunta qasriga madaxtooyada.
Waxaana shir-guddoominayey madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaiil (Saylici), kulankaasina waxa diiradda lagu saaray sdii ay guddi ahaan u dardargelin lahaayeen hawsha qaban-qaabada munaasibadda qaran ee 18-ka May.
Xubnaha guddida, ayaa kulankooda ku faaqiday sidii ay u diyaarin lahaayeen munaasibadda qaran ee 18-ka May, isla markaana dalka looga qaban lahaa munaasibado si heersare ah u abaabulan oo lagu weynaynayo goonni isu-taagga Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaanay si waafi ah uga doodeen waxyaabaha ay guddi ahaan door bidayaan in lagu weynayn karo munaasibaddan.